कर्मचारी समायोजनले विरामीलाई सास्ती - Sabaithari.com
कर्मचारी समायोजनले विरामीलाई सास्ती
भदौ २, पोखरा ।
नेपाल सरकार कर्मचारी समायोजनमा गएसँगै प्रदेशमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको भन्दै प्रदेश सरकारको गुनासो आइरहने गर्दछ । समायोजनसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पदस्थापनको काम अगाडि बढाएपछि कर्मचारीकै अभावमा कास्कीका स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारमा समस्या देखिएको छ ।
कास्की जिल्लाको एक मात्र मातृशिशु मितेरी अस्पलात पोखरामा चिकित्सकको अभाव भएको छ । समायोजनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टरहरुको पदस्थापन गरेसंगै उक्त अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको अभाव भएको हो । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई अन्यत्र पदस्थापन गर्ने र रिक्त रहेको पदमा नयाँ कर्मचारी नपठाउने गरेकाले समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ ।
चौविसै घण्टा संचालित क्षयरोग मैत्री उपचार केन्द्रमा विरामीको चाप बढेपनि चिकित्सकको अभावमा बिरामीले उपचार लिनबाट बन्चित छन् । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको अन्यत्र पदस्थापन भएको र लामो समयसम्म पनि उक्त पद खालि रहँदा बिरामीलाई उपचार दिन समस्या भएको भन्दै आउने बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नु परेको प्रशासकिय अधिकृत ओम प्रसाद थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारको दरवन्दीमा बालरोग विशेषज्ञको पद पनि छ यहाँ । उहाँको ३ /४ महिना अगाडि सरुवा भएर जानुभयो , त्यो तत्कालिन अवस्थामा अब नेपाल सरकारले अर्को कर्मचारी पठाउन नसक्ने अवस्था भयो । तेले गर्दा सेवा लिन आउने विरामीले सेवा पाउन नसक्ने अवस्था भयो । व्यवस्थापन पक्षले दिनको २ घण्टाका दरले एउटा डा. नियुक्ती गरेर काम चलाएका छौ । तर हालसम्म पनि दरबन्धी अनुसारको बालरोग विशेषज्ञको पद खाली छ ।”
विगत सात वर्ष देखि संचालित २५ सैया रहेको उक्त अस्पतालमा लमजुुङ, तनहु, बाग्लुङ, पर्वत, गोरखा लगायतका जिल्लाहरुबाट विरामीहरु उपचारको लागि आउने गर्दछन् ।
यत सामाजिक विकाश मन्त्री नरदेवी पुनले आफु यो विषयमा जानकार रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सकको माग गरेको जानकरी दिनुभयो । समस्या देखेर पनि आफुले केही गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, “डाक्टर नै नभएको होइन तर जुन तहको डाक्टर हुनुपर्छ उहाँको चाहिँ सरुवा भाको छ । नयाँ डाक्टर हामीले खटाएका छौं । तर त्यहि तहको हुनुहुन्न । यो विषयमा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुुरा राखेको छ ु । केहि समय हामीलाई संकट छ । नयाँ कर्मचारी हायर गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । बाँकी हामीसंग जनसक्ती पनि छैन ।”
चिकित्सकहरुको समायोजन भएपछि सामान्य सेवाका लागि पनि बिरामीले अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहने ? यी र यस्ता समस्याको समाधान गर्न सम्वन्धित निकायको ध्यान कहिले जाला ।